Umnyango umisa isingeniso
A umnyango Ima (futhi isivalo sesicabha, ukuma emnyango noma isigaxa somnyango) kuyinto noma into esetshenziselwa ukugcina umnyango uvulekile noma uvaliwe, noma ukuvimbela umnyango ekuvulekeni kakhulu. Igama elifanayo lisetshenziselwa ukubhekisela esitsheni elincanyana elakhiwe ngaphakathi kohlaka lomnyango ukuvimbela umnyango ekungeneni lapho uvaliwe. I-doorstop (esetshenzisiwe) futhi ingaba ubakaki omncane noma ucezu lwensimbi olungama-degree angama-90 olusetshenziswe ohlakeni lomnyango lokumisa umnyango ekushingizeleni (ohlangothini olubili) nokuguqula lowo mnyango uye esiqondisweni esisodwa (in-swing Push noma ukudonsa ukuphuma)Ukubamba iminyango
Isicabha singamiswa ngophawu lomnyango oluyinto nje esindayo eqinile, efana nerabha, ebekwe endleleni yomnyango. Lezi zitobhi zithuthukiswe kakhulu.
 Ngokomlando, izitini eziholayo bekuyizinketho ezithandwayo uma zitholakala.
[2 Kodwa-ke, njengoba kuvezwe ubuthi bomthofu, lokhu kusetshenziswa kuyekiswe kakhulu.
 Enye indlela ukusebenzisa i- ukuma emnyangookuyi-wedge encane yokhuni, irabha, indwangu, upulasitiki, ukotini noma enye into. Ama-wedge enziwe alezi zinto atholakala kakhulu. I-wedge ikhahlelwa endaweni futhi amandla ezansi omnyango, manje aseminyene phezulu phezulu esitobhini somnyango, unikeza ukungqubuzana okwanele ukuze kungagudluki.
 Isu lesithathu ukuhlomisa umnyango uqobo ngenqubo yokumisa. Kulokhu, ibha yensimbi emfushane eboshwe ngerabha, noma enye into exubana kakhulu, inamathiselwe kwihinji eseduze nesisekelo somnyango maqondana nomnyango wesicabha nasohlangothini lomnyango oqonde ovalweni. Lapho umnyango uzogcinwa uvulekile, umgoqo uvulwa phansi ukuze isiphetho senjoloba sithinte phansi. Kulokhu kulungiswa, ukunyakaza okuqhubekayo komnyango oya ekuvaleni kwandisa amandla ekugcineni kwenjoloba, ngaleyo ndlela kwandise amandla okulwa aphikisana nokunyakaza. Lapho umnyango uzovalwa, isitobhi sikhishwa ngokucindezela umnyango uvuleke kancane, okukhipha isitobhu nokuvumela ukuthi uphenye ubheke phezulu. Uhlobo olusha lokuhlomisa umnyango ngenqubo yokumisa ukunamathisela uzibuthe ezansi komnyango ohlangothini oluvulekela ngaphandle olunamathisela komunye uzibuthe noma okomazibuthe odongeni noma ihabhu elincane phansi. Uzibuthe kufanele uqine ngokwanele ukubamba isisindo somnyango, kepha ubuthakathaka ngokwanele ukuthi ungasuswa kalula odongeni noma ehabheni
Ukuvimbela umonakalo ngeminyango
Olunye uhlobo lwesango lomnyango lusetshenziselwa ukuvimbela iminyango ukuthi ivuleke kakhulu futhi ilimaze izindonga eziseduze. Kulokhu isilinda noma irome yenjoloba - noma induku noma ibhulokhi yensimbi enezintambo zenjoloba, ukhuni noma ipulasitiki - is screwed odongeni, ukubumba noma phansi endleleni yomnyango. Uma sinamathele odongeni, kungaba ngamasentimitha ambalwa ngaphezu komhlaba, noma ukuphakama okufana nokuhlangana nobani womnyango. Umnyango omfushane, onamathele odongeni, imvamisa i-raber dome noma isilinda, kwesinye isikhathi ubizwa nge-wall bumper.
Kwesinye isikhathi, kusetshenziswa izitobhi ezifakwa maphakathi nomnyango, njengengxenye yomnyango ophakathi nendawo. Izitobhi ezinjalo zaziwa njenge "hinge stops" noma "hinge pin" emnyango futhi zivame ukusetshenziselwa ukuvimbela ukulimala ekubunjweni kwebhodi.